Lova navelan’i mpitarika ny indizeny Mama Tránsito · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2009 17:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
Misaona noho ny fahalasanan'ny iray amin'ny mpitarika eo amin'ny fokonolona, dia ny fahafatesan'i Rosa Elena Tránsito Amaguaña ny fokonolona indizeny, mpikatroka amin'ny fampanajana ny zon'olombelona, ary ny vahoaka Ekoateriana amin'ny ankapobeny. Amin'ny maha-“Mpanorina an'i Ekoatera Vaovao,”azy dia izy, miaraka amin'i Dolores Cacuango [es], fantatra amin'ny hoe Mama Dulu ary ilay mpanoratra Nela Martínez [es], no iray amin'ny andry iankinan'ny Hetsika Indizeny Ekoateriana.
Maty nandritra ny andro manokana eto Ekoatera izay fetin'ny reny i “Mama Tránsito” araka ny ahafantarana azy. Amin'ny mahampikambana ao amin'ny Fokonolona indizeny Kichwa azy, ny finoany dia manambara fa niala tamin'ny tontolon'ny Pachamama ( i Mama Tany) hiditra any amin'ny Samay Pacha (Tontolon'ny Fanahy) izy ary tsy tokony hiteraka alahelo izany fahafatesana izany, fa tokony hahafaly sy ankalazaina amin'ny loko marevaka aza. Nolazaina fa niaina nandritra ny taonjato iray moa i Mama Tránsito saingy mpitranga any amin'ny fianakaviana Ekoatoriana izany, Voasoratra ao amin'ny biôgrafiany fa teraka tamin'ny taona 1909, saingy nohitrikitrihany matetika fa teraka enina taona mialoha io izy.
Malahelo noho ny fahalasanan'i Mama Tránsito ny mpamaham-bolongana Ekoatoriana ary mahatsiahy ny lova navelany ho an'ny hetsika Ekoateriana indizeny. Namoaka lahatsoratra iray nosoratan'i Silvia Cuevas-Morales indray i Vamos a Cambiar el Mundo [es]. Mitantara ny fahazazan'i Mama Tránsito tany Huasipungo ny lahatsoratra sy ny fisisihan'ny reniny hampiditra azy an-tsekoly mba tsy haha-tsy mahay mamaky teny azy. Na izany aza dia niasa nanao mpanampin'olona tany amin'ireo mpanantany midadasika (hacienda) mialoha be izy.
Ny fampijaliana sy ny fahasamihafan-tsaranga hitany mivantana no nanetsika azy hitolona ho amin'ny fampanajana ny zon'ny fokonolona indizeny. Nanjary tafiditra lalina tamin'ny resaka sendikaly ny vehivavy ary nandray anjara tamin'ny fananganana ny sendikàn'ny tantsaha voalohany tany Ekoatera. Ankoatra izany dia iray tamin'ny mpikambana nanorina ny Federasiona Ekoateriana Indiana (FEI) izy sy nanorina ny sekoly mianatra amin'ny fiteny roa samihafa voalohany.
Sarin'ny filoha Rafael Correa manatrika ny fandevenana. nampiasaina avy amin'ny alalana Creative Commons license. http://www.flickr.com/photos/presidenciaecuador/3529551826/
Nandritra ny famangiany matetika an'i Kiobà no nianarany namaky teny sy nanoratra fony mbola voarara ny nampianatra ny indizeny tamin'izany fotoana izany. Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny antoko komonista azy dia tadidy amin'ny maha-“kamarady” azy izy, ary manome voninahitra ny asany ny bolongan'ny Tanora Komonist'i Ekoatera [es] satria nosihosena sy nambakaina ny faritra Indizeny maro “tsy naka fanapahan-kevitra momba ny fiainany tahaka ny biby miasa” ireo. Fa manam-panantenana ihany izy ireo tamin'ny fanoratana hoe:
Matoky tahaka an'i “Mama Tránsito” isika rehetra fa “fa ho avy ny andro fa hiara-mihinana amin'ny vilia iray avokoa na indizeny, na mainty, na fotsy, na metisy.”
Nahatonga aingam-panahy tamin'ny maro ny nataony ary nisafidy ny tantaran'i Mama Tránsito hataony devoara ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolo Nati Wolf ao amin'i La Chica de la Luna [es]. Namangy ny fokonolona La Chimba hitafa mivantana amin-dramatoa i Wolf sy ny mpiara-mianatra aminy. Manoratra ny lazainy fa endrika hafa hita amin'i Tránsito Amaguaña sy ny fahitany ny fomba fiainan'ity mpitarika indizeny ity ny mpamaham-bolongana. Norandranin'i Wolf ary fa na dia misy ihany aza ny fivoarana dia mbola maro kosa ny lohahevitra mbola tsy nahitan'i Tránsito vahaolana:
Mampiseho ny fianany feno tolona sy atrikasa ny fahitana ny masony reraka manganohano, ny ketroketrona amin'ny tavany ary ny ozan-drany matevina, milaza amiko ireo fa mbola lavitra ny lalana, na dia nitondra fitoniana tany amin'ny faritra maro aza izay nataony. Mbola misy ny fahantrana, manjaka ny fanavakavahana, ary mbola voahosihosy hatrany ny zontsika isaky ny segondra iainantsika.
Matoky aho fa nitondra traika lehibe tamin'ny fiainan'izay nihaona taminy izy. Ny lahatra no nitondra anay hihaona aminy ialoha ny handaozany ity tany ity. Nanome antsika ny voam-pikirizana sy fahasahiana entina manohy ny tolona izy. Fantatsika fa raha mivondrona isika dia maro ny zavatra azo tontosaina..
Raha hijery ny famangian'i Wolf, aza fady tsidiho ny takelaka Flickr ato.
Ireto koa misy lahatsary (I & II) ao amin'ny YouTube hampahalala bebe kokoa antsika ny fiainan'i Transito Amaguaña. Manana rakitsary[es] ihany koa i El Universo.
26 Mey 2009, 22:11